Kitty For Me: July 2007
Posted by Me at 3:15 AM No comments:
မနေ့ညက MNet M Concert ကြည့်ရင်းနဲ့ သဘောကျသွားတဲ့ အဖွဲ့လေးပါ။ FT Island ဆိုတာ Five Treasure Island တဲ့။ Pop- Rock အမျိုးအစားပါ။ vocal ဆိုတဲ့ ကောင်လေးက ဆံပင်ကြက်တောင်စည်းလေးနဲ့။ ဒရမ်တီးတဲ့ ကောင်လေးက ပိုချောတယ်။ Album တစ်ခုပဲ ထွက်ထားသေးတယ်။
Name : Lee Hong Gi
Birthday : 1990, 6th Feb
Hobbies : Singing, Listening to Music, Playing Soccer, Video Games
Skills : Singing , Playing Soccer
Name : Lee Jae Jin
Birthday : 1991, 17th December
Hobbies : Internet Surfing, Questioning about music to the music specialist
Skills : Playing Bass
Birthday : 1990, 26th March
Hobbies : Exercising, Reading, Listening Music
Name : Choi Jong Hun
Birthday : 1990, 7th March
Hobbies : Internet, Listening Music
Skills : Playing Piano and Guitar
Name : Choi Min Hwan
Birthday : 1992, 11th November
Skills : Playing Drums, Eating Chicken
FT Island - Love Sick Music Video
Paran - Forever Loving You
အခုတလော Paran ရဲ့ Forever Loving You ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို အရမ်းကြိုက်နေမိတယ်။ အဲဒီသီချင်းက ဘယ်အချိန်ထဲက စက်ထဲမှာ ရှိနေလဲ မသိဘူး။ အင်္ဂလိပ် MP3 folder တွေထဲမှာ ရောက်နေတာ။ ဟိုတစ်နေ့ကမှ အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေ နားထောင်ရင်းနဲ့ အဲဒီသီချင်းလေးက ပါလာတာ။ ဘယ်သူတွေဆိုတာလဲလို့ file ကိုကြည့်လိုက်တော့မှ Paran တဲ့။ သီချင်းလေးကို နားထောင်ပြီး ချက်ခြင်းသဘောကျသွားမိတယ်။ တစ်ပုဒ်လုံးကို အင်္ဂလိပ်လို ဆိုထားကြတာ။ နားထောင်းလို့ တော်တော်ကောင်းတယ်။ သူတို့ရဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုဆိုထားတဲ့ အသံကိုလဲ သဘောကျတယ်။ တစ်ဖွဲ့လုံးက သိပ်အချောကြီးတော့ မဟုတ်ဘူး။ Lead Vocal .. Ryan တစ်ယောက်တော့ ချောပါတယ်။ Buzz vocal...Min Kyung Hoon နဲ့ တစ်ခါတစ်လေ တော်တော်တူတယ်။ Dream Concert မှာတုန်းကဆိုရင် Min Kyung Hoon နဲ့ အရမ်းကိုတူတယ်။
Hello I believe you ~
Let me hear you still me tonight ~
I'll stay the world with you I haveastory, too~
It's beenalong time since we beenalong all the night ~
I'll be with you all day and be forever by you
Be forever with you ~
I believe in you all of my life how can we be just as one ~
I don't want you to stay alone now Wait for me and we'll be find~
When you want me I'll come to you ~
I don't want you do be alone tonight
I belive in our love to to stay alive ~
I can't survive here unless I can stay with you (with you with you~)~
I'll be with you all day, and say that I love you~
Say that I lover you ~ woo ~ wuh ~
I believe in you all of my life (all of my life)
how can we be just as one ~(just as one ~)
I don't want you to stay alone now.
Wait for me and we'll be find~ (and will be find ~)~
When you want me I'll come to you (come to you )~
I don't want you do be alone tonight,
I belive in our love to stay alive (alive ah ah ah ah ~ )*
I've lost in love affairs (love affairs)
now I know I found the one (I find the one)
Feelings of loneliness for once and over now ah ~
I believe in you all of my life (I belive in you war ~)
how can we be just as one ~(war~~)
I don't want you to stay alone now,(woo wuh~)
Wait for me and we'll be find~ (and will be find woo yeah ~)~
When you want me I'll come to you
(and will come to you war woo war woo yeah~)~
I belive in our love to to stay alive ~(stay alive)
(I belive ~ yeah ~)
Wait for me and we'll be find~ ~
(I belive in you, you believe me I wanna stay alive)
I belive in our love to stay alive. ~
:::GIVE A SALUTE TO GENERAL AUNG SAN AND OUR INDEPENDENCE LEADERS :::
Let's do exercises !!
အခုတလော အလုပ်ကြောင့်လဲ စိတ်တွေရှုပ် ။ စာမေးပွဲတွေကြောင့်လဲ ခေါင်းရှုပ်။ ဒေါသတွေထွက်။ စိတ်ညစ်နေမိတယ်။ ဖိုရမ်ဖတ်ရင်းနဲ့မှ တော်မီ့ ဆစ်ကနေချာလေးကို မြင်ပြီး သူငယ်ချင်းက အဲဒီပုံလေးတွေ ပို့ထားတာကို ပြန်ပြီးသတိရမိတယ်။ ချစ်စရာ အရုပ်လေးတွေ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေကြတယ်။ တစ်ပုံခြင်းကို သေသေချာချာကြည့်ပြီး နဲနဲစိတ်ချမ်းသာသွားတယ်။ ကဲ ပုံလေးတွေထဲက အတိုင်း လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ကြရအောင်။
let's do exercise !!
1st : Warming up
2nd : Stretching
3rd : The upper body exercise
4th : The lower body exercise (moving to left and back)
5th : The lower body exercise (moving to right and back)
6th : Head exercise
7th : Whole body exercise
8 th : Jumping exercise . The post is the key ! but remember to jump !
9th : Relax
10th : Over ! Well done !
Posted by Me at 10:56 AM3comments:
အခုတစ်လော အရမ်းပျင်းနေတယ်။ ဘလော့လဲ မရေးချင်ဘူး။ စာလဲ မကျက်ချင်ဘူး။ ရှေ့တစ်ပတ်မှာ ပြရမယ့် Research Presentation အတွက်လဲ ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူး။ ရုံးမှာလဲ အခုတလော တော်တော်အားနေတယ်။ ဘာအလုပ်မှ မရှိသေးဘူး။ တစ်နေကုန် အလေလိုက် အခြေစိုက်။ အကြောင်းအရင်းကတော့ တစ်နေ့လုံး ဒီဂိမ်း ထဲမှာပဲ။ ဟိုလူ့ကို ချလိုက် ။ ဒီလူ့ကို ချလိုက်နဲ့။ ဟဲဟဲ။ အပြင်မှာ မလုပ်ရသမျှ ဂိမ်းထဲမှာ လိုက်ချနေမိလားတောင် မသိတော့ဘူး။
Posted by Me at 8:38 AM3comments:
Kim Dong Wan - Kim Dong Wan Is (Preview)
3. 손수건 (Handkerchief)
7. My Love - Feat. Eric
10. 사랑해선 안될 사람 (Can not love u) - Duet with Sung
Watch "Handkerchief" Musci Video
Download at Mediafire Link
Posted by Me at 2:11 AM 1 comment:
ဒီဆိုဒ်မှာ ဒီလို ချစ်စရာ maker လေးတွေ အများကြီးပဲ။
Linkin Park သီချင်းတွေထဲက အကြိုက်ဆုံးသီချင်းတစ်ပုဒ်။ သီချင်းစစခြင်းမှာ တီးသွားတဲ့ တီးလုံးလေးကို သိပ်သဘောကျတယ်။ ဒီသီချင်းစာသားစတိုင်လေးက ညီမလေးဆီကရတာ။ မိုက်တယ်။ သီချင်းစာသားလေးတွေကို flash နဲ့လုပ်ထားတာလား မသိဘူး။ အဲဒီဆိုဒ်ထဲမှာလဲ သီချင်းတော်တော်များများရှိသားပဲ။ နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ သီချင်းတွေတော့ မရှိသေးသလိုပဲ။ Linkin Park ရဲ့ What I've done ကိုရှာတာ မတွေ့မိဘူး။ ဒီသီချင်းစာသားဆိုဒ်လေးက ဒီမှာ ။